etone နောက်ကလိုက်ခြင်း(ပစ်သူတစ်ဆယ် ဖွသူငါး သိမ်းသူတစ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » etone နောက်ကလိုက်ခြင်း(ပစ်သူတစ်ဆယ် ဖွသူငါး သိမ်းသူတစ်)
etone နောက်ကလိုက်ခြင်း(ပစ်သူတစ်ဆယ် ဖွသူငါး သိမ်းသူတစ်)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 4, 2012 in My Dear Diary, Photography | 32 comments
1 နံနက်မိုးမလင်းခင်မှာကတည်းက သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရှာတဲ့စည်ပင်ဝန်ထမ်း
2 ဒါကလဲမနက်အရုဏ်တက်မှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ
3မနက်စောစော ၀ီရိယကောင်းကောင်းနဲ့ သန်ရှင်းရေးလုပ်နေသူမန်းစည်ပင်ဝန်ထမ်း
4 ကန်တော်ကြီးကန်ပါတ်လမ်းမှာ သန့်ရှင်းလုပ်နေတဲ့သ မနက်စောစောပါ
5 84×37 လမ်းဒေါင့်မှာ မနက် 8နာရီလောက်မှာ သန့်ရှင်းပြောင်လက်နေအောင် ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းများ
6 အမိူက်ကောက်တဲ့ကလေးငယ် (ဒီပုံကတော့ တစ်ခါတင်ဘူးတယ် ၀မ်းတစ်ထွာမှာ)
7 အမိူက်တွေကို ဖြစ်သလိုပစ်ထား ခွေးကလာဖွ အဲတော့
8 အမိူုက်ကောက်တဲ့ကလေးတွေက ၀င်ဖွတော့ ပိုပွသွားပါတယ်
10 သူလဲ အမိူုက်ဖွတဲ့အထဲပါတာဘဲ
11 ဇန်န၀ါရီလဆန်းလောက်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာ
12 အဲဒီနေရာကို ဒီအမိူက်ပုံးချပေးထာတယ်လေ
13 ထူးမခြားနားအမိူက်တွေက ပွဆဲ (လူတွေစည်းကမ်းမရှိတာလဲပါတယ်)
14 ကန်တော်ကြီး အနောက်ဘက်တိုက်ခန်းကအမိူက်ပုံ 2011 ဒီဇင်ဘာ
15 လက်ရှိ2012 ဇူလိုင်လ မှာမြင်ရတာလေး
16 2011ခုနှစ်က မြင်ရတဲ့ အမိူက်မပစ်ရတဲ့နေရာ
17 ဇူလိုင်လ တစ်ရက် 2012မှာတွေ့ရတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အနေအထား
18 2011 တုန်းက ကန်တော်ကြီးတိုက်ခန်းတွေက မရှင်းရသေးတဲ့မြင်ကွင်း စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့
19 2012 နှစ်ဆန်းမှာ တစ်ခါဝိုင်းပြီးရှင်းလိုက်ကြပါတယ် အခုပြန်ပြီးတော့ ပွထသွားတဲ့မြင်ကွင်း။
20 သူတို့ဆီက စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်း သူတာဝန်ကျတဲ့နားမှာမုန့်စားနေတာ
21 ရွှေလီလမ်းဆုံက အမိူက်ပုံး
22 သူတို့ဆီက အမိူက်ပုံးထားတာလေ အမိူက်ကတော့ ဘေးပစ်သွားသူလဲရှိတာဘဲ
23 သူတို့ဆီက အမိူက်သိမ်းအဖွဲ့
(ပစ်သူတစ်ဆယ် ဖွသူငါး သိမ်းသူတစ်)”
ဒီနေ့မနက် ၇း၃၀လောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့အလုပ်ကိုအသွား ၃၇လမ်း၈၄လမ်းဒေါင့်မှာ စည်ပင်သာယာအမုိူက်သိမ်းတဲ့ကားက အမိူက်ပုံ်ကိုပြောင်သန့်နေအောင်သိမ်းနေတာ
သူတို့ကားလေးထွက်သွားလို့မှ မကြာသေးဘူး အဲဒီပြောင်သန့်နေတဲ့နေရာလေးကို
ကောင်ကလေးနှစ်ယောက်က ခြင်းကြားကြီးနဲ့အမိူက်တွေ လာပစ်သွားတော့
မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်း သန့်ရှင်းနေတဲ့နေရာက အမိူက်ပုံပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ခက်တာက အဲဒီနားမှာ အမိူက်ထည့်ဘို့ ဘာပုံးမှ မရှိတာပါဘဲ။
အဲဒီမြင်ကွင်းလေးမြင်တော့ အချိတ်အဆက်တွေလွဲနေတဲ့ အမိူက်ပစ်သူနဲ့
အမိူုက်သိမ်းသူ ကို ညီအောင်ညှိပေးချင်စိတ်ကလေးပေါ်လာပါတယ်။
အဲဒါလေးတွေမြင်တော့ ကျနော်စိတ်ထဲမှာဟိုတစ်ရက်က etone ရဲ့
ဒီအမိူက်ပြဿနာက အတော်လေးကို အုံးစားရတဲ့ပြဿနာလဲဖြစ်ပါတယ်။
နေရာတကာမှာ ဒီ အမိူက်ကိစ္စက အတော်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
အမြင်မတော်ဘူး အနံ့အသက်မကောင်းဘူး ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ဘူး ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်များ
အောက်မှာ ခေါင်းမဖော်နိုင်ရှာတာကတာ့ “စည်ပင်သာယာ” ပါဘဲ။
သူက ကျနော်တို့ဆီက သန့်ရှင်းရေးအခွန်တွေကောက်ခံထားတော့ သူ့တာဝန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။
ဟိုနားမှာ အမိူက်ပုံကြီး ဟီးနေတာဘဲ ဆိုပြန်ရင်လဲ “စည်ပင်သာယာ”က လာမှမသိမ်းတာ။
အမိူက်ပုံကြီးနားက အိမ်တွေ အနံ့အသက်ဆိုးလို့ နေုလို့မရဘူးလို့ သတင်းစာ ပြည်သူ့အော်သံ
ကဏ္ဍမှာပါလာပါရင်လဲ “စည်ပင်သာယာ” ကလာမှမသိမ်းတာဆိုတဲ့အသံဘဲထွက်လာပါမယ်။
အမိူက်ဆိုတာနဲ့ “စည်ပင်သာယာ” က ပြေးမလွတ်တဲ့သူဖြစ်သွားပါတယ်။
ဟိုးအရင်က ဆိုရင် မန်းလေးမြို့က ရပ်ကွက်တွေရဲ့ လမ်းဒေါင့်တိုင်းလမ်းဒေါင့်တိုင်းမှာ
မနက်ကိုးနာရီလောက်ဆိုရင် ဒီသံစည်ပိုင်းကြီးထဲက အမိူက်တွေကို စည်ပင်သာယာက လာသယ်ပြီးသားပါ။
ဒီအမိူက်ကလဲ ည ညလာသိမ်းတော့မနက်ဆိုရင် မရှိတော့။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတော့ မန်းလေးမြို့ နေရာအတော်များများမှာ အမိူက်ပုံတွေမြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်လာပါတယ်။
စည်ပင်သာယာက ဒီအမိူက်ကို မသိမ်းဘူးလားဆိုသိမ်းပါတယ်။
ကျနော်ကြားရသလောက်ဆိုရင် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အမိူက်ပုံကိုပါတ်ကြည့်ဘို့ ၀န်ထမ်းသီးသန့်ခန်ထားတယ်ပြောပါတယ်။
အမိူက်ပုံတွေ့ရင်သိမ်းဘို့အတွက်သူကပြန်ညွှန်ကြား အဲလောက်အထိကို ပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လမ်းကြိုလမ်းကြားမှာ အမိူက်ပုံတွေက ရှိနေပြန်ပါတယ်။
တိုးပွားများပြားလာတဲ့ လူဦးရေက စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အမိူက်အင်အားမမျှတလို့လားလို့ပေါ့။
ဒါပေမယ့်လည်း လမ်းဘေးမှာအလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိလူတွေကိုတောင်ခေါ်ပြီး
စည်ပင်သာယာက နေ့စားဝန်ထမ်းခန့်ပြီး အမိူက်သိမ်းခိုင်းတယ်ဆိုပြန်တော့
အခုလက်ရှိအနေအထားမှာ မန်းလေးမြို့မှာလူဦးရေများ တော့ အိမ်ထောင်စုတွေများလာ။
ဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့ လူများများနေနိုင်တဲ့ တိုက်ခန်းတွေပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။
အရင်က မြေတစ်ကွက်မှာမိသားစုတစ်စုနေရာကနေ တိုက်ခန်းတွဲတစ်တွဲမှာ မိသားစုအများကြီး
တိုက်ခန်းနေလူတွေအတွက် အမိူက်သွန်စရာ နေရာပေးထားပေမယ့် အပေါ်ထပ်နေသူများက
နောက်ဒီလိုတိုက်ခန်းတွေအတွက် အမိူက်ပစ်စရာနေရာ သီးသန့်မရှိတာများပါတယ်။
အမိူက်လာပစ်တဲ့သူများကလဲ အမိူက်ပုံနားမှာ ပြီးစလွယ်ပစ်သွားပါတယ်။
ပလပ်စတစ်ကောက်တဲ့ အမိူက်ကောက်တဲ့သူများကလဲ သံချွန်တစ်ချောင်းနဲ့
စိတ်တိုင်းကျ ပွထနေအောင်မွှေပြီး သူလိုချင်တာရအောင်ရှာပါတယ်။
အမိူက်ကောက်သူလေးငါးယောက်လာရင် လေးငါးခါ ပြန့်ကျဲ ကုန်ပါတယ်။
နောက်အမိုက်ပုံနားမှာ မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ ခွေးအပေါင်းကလဲ အမိူက်ပုံမှာ
အဲဒီနားနေသူက မွေးထားတဲ့ ဆိတ်၊နွား၊ဘဲ၊ကြက်၊၀က် စတဲ့သတ္တ၀ါများကလဲ
နုတ်သီးနဲ့ထိုး ခွာနဲ့ယက် ခြေထောက်နဲ့ယက်လို့ အစာရှာစားရင်း ပိုင်ရှင်မဲ့
အမိူက်ပုံကို စိတ်တိုင်းကျ ဖွကြပါတယ်။
အစကတည်းက မှန်မှန်မသိမ်းတဲ့ အမိူက်ပုံက ပွစာကျဲပြီးလူမြင်မကောင်းဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။
ဒီ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေကို ကြုံတွေ့ရပါတယ်၊
အဲတော့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေလဲ ပုံစံပြောင်းတယ်။
စည်ပင်သာယာကလဲ အရင်ထက်ပိုအလုပ်လုပ် လာပါတယ်။
ဟိုးအရှေ့ထိပ်ထိ အမိူက်တွေဖုန်တွေကို သန့်နေအောင် မနက်ငါးနာရီလောက်ကတည်းက
ကျနော်ကလဲ မနက်တိုင်းလမ်းလျောက်သူတို့ကလဲေ န့စဉ်မပျက် သန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်ပါတယ်။
မနက် ၇း၃၀လောက် ကျနော်အလုပ်သွားပြီဆိုရင်လဲ ၈၄လမ်းတစ်လျောက် မှာ တောင်ကနေမြောက်
35လမ်းထိ လမ်းဘေးမှာရှိသမျှအမိူက်တွေ ပြောင်ရှင်းနေအောင်အမိူက်တွေသိမ်းကြပါတယ်။
ညပိုင်းမှာဆိုရင်လဲအ မိူက်တွေကို နေ့စဉ်သိမ်းပါတယ်။
နောက်ညပိုင်း ၈း၃၀လောက်ဆိုရင် ၃၄လမ်းနဲ့၈၁လမ်းဒေါင့်မှာရှိတဲ့အမိူက်ပုံကို အမိူက်ကားကလာသိမ်းပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မျိုးဆိုရင် အင်မတန်လေးစားစရာကောင်းတဲ့မိသားစုတစ်ချို့က အဲဒီအမိူက်ကားဆီကို
၃၅လမ်း၈၁နဲ့၈၄ကြားမှာဆိုရင်လဲ ညပိုင်းဆိုရင် စည်ပင်သာယာအမိူက်ကားက ပုံမှန်လာပြီးအမုိူက်သိမ်း
တော့ အဲဒီပါတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကလူတွေက အမိူက်ကားဆီကို အမိူက်တွေလာပစ်တာကို မြင်ရပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း ထူးခြားလာတာကတော့်နေရာတော်တော်များများ မှာအမိူက်ပစ်ဘို့သံကန်ကြီးတွေချပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အမိူက်ပမာဏနဲ့ အမိူက်ပုံးသဟာဇာတမဖြစ်တော့ အပြင်မှာလျံကြကုန်ပါတယ်။
လမ်းမတန်းတွေမှာသာ အမိူက်ကိုနေ့စဉ်သိမ်းပေ့မယ် လမ်းကြိုလမ်းကြားတေတို့၊
တိုက်ခန်းတွေဘက်တွေတို့မှာ အမိူက်သိမ်းတဲ့ကားက နေတိုင်းလာပြီးမသိမ်းပါဘူး။
လေးငါးရက်တစ်ခါ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ပါတ်မှာတစ်ခါလောက်ဘဲအမိူက်သိမ်းတယ်ဆိုပြန်တော့
အနီးနားက တိရိစ္ဆာန်တွေက တစ်ခါ ထပ်ဖွ ။
အမိူက်ပုံကပွနေတော့ အမိူက်လာပစ်တဲ့သူက ပြီးစလွယ်ပစ်၊။
အဲတော့ ပွသထက်ပိုပွ ဆိုတဲ့ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်လာတာပေါ့။
မန်းလေးစည်ပင်သာယာက အရင်ထက်စာရင် အမိူက်ကိစ္စမှာအများကြီးပိုကြိုးစားပြီး
သို့သော်လမ်းမတန်းတွေမှာသာ အသေအချာ အမိူက်သိမ်းကြ
ဒီအခါမှာ အမိူက်ပစ်သူကလဲ စနစ်တကျမပစ်။
အဲတော့လမ်းကြားတွေက အမိူက်တွေပြန့်ကျဲညစ်ပတ်ပေရေ အမိူက်တွေဗလပွ။
နောက်ဖေးလမ်းကြားကြပြန်တော့လဲ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့လုပ်သူတွေကြောင့် မလှမပ။
တုိုက်ခန်းနေထိုင်သူများကလဲ အမိူက်ကိုအလွယ်တကူဘဲ နောက်ဘေးလမ်းကြားကိုပစ်ချ။
ကြာတော့ အမိူက်တွေက ပုပ်ပွလို့အနံ့ဆိုးတွေထွက်နဲ့အတော်စိတ်ပျက်စရာပါ။
ဒီအမိူက်ကိစ္စကို ပြောမယ်ဆိုရင် စည်ပင်သာယာ တစ်ခုထဲကိုဘဲ ၀ိုင်းလက်ညှိုးထိုးလို့မရဘူးလို့ကျနော်ကတော့ယူဆပါတယ်။
သူတို့တာဝန်က အမိူက်ပစ်စရာ နေရာသတ်မှတ်ပေးရမယ်၊
ကိုယ့်အထက်က အရာရှိ တွေအမြဲဖြတ်သွားဖြတ်လာ လုပ်တတ်တဲ့နေရာလောက်ဘဲကွက်ပြီး
သန့်ရှင်းအောင်လုပ်တာထက် လမ်းကြိုလမ်းကြားမကျန် စနစ်တကျနဲ့အမိူက်သိမ်းသင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ တကယ်လိုအပ်နေတယ်လို့ယူဆရတဲ့ အချက်လေးကတော့ ၀န်ထမ်းတိုင်းမှာ
စနစ်တကျလုံလုံခြုံခြုံ ထုပ်ပိုးပြီးမှ အမိူက်ပစ်ဘို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာသွားပစ်မယ်
အမိူက်ကားမလာသေးခင် ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် ခဏသိမ်းထားမယ်။
အမိူက်ပုံနဲ့နီးတဲ့သူများကလဲ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်က အမိူက်ပုံသွားမဖွအောင်
အမိူက်လာကောက်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ် တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ် အမိူက်ပုံကိုလာဖွနေတာကိုတွေ့ရင်
တားဆီးမယ် ဆိုရင် အတော်လေးကိုကောင်းလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ကိုယ်နေတဲ့မြို့ ကိုယ်နေတဲ့ရပ်ကွက်သန့်ရှင်းသာယာဘို့က နေထိုင်သူအားလုံးမှာ
တာဝန်အသီးသီး ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်ရက်အတွင်းက သူများတိုင်းပြည်နယ်စပ်မြို့ ကျယ်ဂေါင်နဲ့ရွှေလီမြို့ဘက်ကိုကျနော်ခဏ
မနက်အစောခြောက်နာရီလောက်ဆိုရင် ရွှေလီတံတားထိပ်မှ အမိူက်သိမ်းနေတဲ့အမျုိးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။
သူ့မှာ ဆိုက်တွဲလေးပါ ပါတယ်၊
ကျယ်ဂေါင်မြို့က မန်းလေးမြို့ကရပ်ကွက်ကြီး တစ်ကွက်စာလောက်ဘဲရှိပါတယ်။
ဆိုက်တွဲရယ် ပုံးတစ်လုံးရယ် သစ်ကိုင်းတံမျက်စီးရယ်ပါတဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်စီကိုတွေ့နေရပါတယ်။
ရွှေလီဘက်ရောက်ပြန်တော့လဲ လမ်းဒေါင့်တွေမှာ အမိူက်ထည့်စရာပုံးလေးတွေချထားပေးပါတယ်။
ဆိုက်တွဲနဲ့ တံမျက်စီးလှည်းနေတဲ့ အဖွဲ့ကိုလည်းရွှေလီလမ်းမကြီးပေါါ်မှာနေ့ခင်းတစ်နာရီလောက်မှာ
မြို့သန့်ရှင်းအောင် တာဝန်ယူထားရတဲ့ စည်ပင်သာယာကလဲ သူ့တာဝန်သူကျေအောင်လုပ်၊
ကျနော်တို့လို့ မြို့သူမြို့သားတွေကလဲ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ အမိူက်ကိုစွန့်ပစ်မယ်ဆိုရင်
လက်ရှိမှာတော့ ဆိုင်းဘုတ်က ဆိုင်းဘုတ် အတိုင်းဘဲရှိပြီး ဘယ်သူလိုက်နာတာမတွေ့ရပါဘူး.။
ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီး သတိပေးရတယ်ဆိုမှ တကယ်မလုပ်ကြသေးလို့ဆိုတာ ကိုဖော်ပြနေသလိုပါဘဲ။
မီးပွိုင်က နီနေလို့ အရှိန်ရှော့ပြီး စီးအလာ ကျနော်ကို တစ်ခုခုလာစင်သလိုခံစားရလို့ကြည့်လိုက်တော့
ကျနော့် ဘက်ဘက်လက်မောင်းမှာရော ရင်ဘတ်မှာပါကွမ်းသွေးတွေ။
မီးနီရာကနေ အစိမ်း ကိုအပြောင်း အရှိန်မရှော့ဘဲမောင်းလာတဲ့ စစ်ကိုင်းကားခေါင်မိုးပေါ်မှာထိုင်လိုက်လာတဲ့
လူက စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ထွေးလွှတ်လိုက်တဲ့ ကွမ်းသွေးတွေလာစင်တာပါ.။
ဦးထုပ်မပါဘဲမောင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကို ငေးကြည့်နေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းကိုဘဲသွားတိုင်ရမလား။
တကယ်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် တွေးကြည့်တော့ တိုင်စရာနေရာမရှိပါဘူး။
အလုပ်ကတော့ သေချာပေါက်နောက်ကျတဲ့အတွက် မြန်မာငွေ ကျပ်ငါးရာ ဖိုင်းတပ်ခံရပါမယ်။
ပြောသာပြောရတယ် နေ့စဉ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတာ ဟိုလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်လို့
ညွန်ကြားလို့သာလွယ်တာ တကယ်လက်တွေ့လုပ်ဘို့တော့ ခက်ပါသဗျာ၊
အမှိုက် စည်းကမ်းမဲ့ပစ်တာကို ဥပဒေထုတ်ပြီး ခပ်စပ်စပ်လေး အရေးယူမှ ဖြစ်မှာပါ..။
(အရေးမယူခင် အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အမှိုက်သိမ်းစံနစ်တော့ အရင်လုပ်ထားရမှာပေါ့)
ိကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေက အမှိုက်စည်းကမ်းမဲ့ပစ်တာ တော်တော်ကျင့်သားရနေပြီ ကိုပေါက်ရေ..။
လေးပေါက်ရေ.. အမှိုက်ပြဿနာက စည်ပင်ကိုဘဲ လက်ညိုးထိုးလွဲချနေလို့ ကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြီးသွားမဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး ။
လေးပေါက်ပြောသလို ပစ်တဲ့ သူတွေလည်း စည်းကမ်းရှိရန် အလွန်လိုပါသည် ။
အချိန်နဲ့ ပုံမှန်ပစ်ရင် စည်ပင်ညလာသိမ်းသွားတဲ့ အတွက် သိပ်ရုပ်မပျက် မမြင်ရနိုင်ပါဘူး ။
၇ မိုင်ပြည်လမ်း က တေးနုယဉ်လမ်း နဲ့ ပါရမီ မီးပွိုင့်နားမှာ အမှိုက်ပုံ နှစ်ခုရှိပါတယ် ။ နေ့ဘက်ဆိုမြင်ရခဲပါတယ် ။
ညနေကျမှ အမှိုက်လာ ပစ်တဲ့ အတွက် ညနေပိုင်းလောက်ကစလို့ အမှိုက်ရှိပေမဲ့ ညဘက် ကားလာသိမ်းသွားတဲ့ အတွက် ရုပ်ပျက်လောက်အောင် မမြင်ရပါဘူး။
တေးနုယဉ်လမ်းထဲမှာ အမှိုက်ပုံ မတွေ့ရပါဘူး ။ နေ့စဉ် ညနေ ၅ နာရီမှာ အမှိုက်လှည်းနဲ့ လာသိမ်းပါတယ် ။အိမ်တိုင်းကလည်း ကိုယ့် အမှိုက်ပုံးလေးတွေ အမှိုက်လှည်း ခေါင်းလောင်းခေါက်သံကြားတော့မှ အိမ်ရှေ့ ထွက်ပြီး ချထားပေးပါတယ် ။ အမှိုက်သိမ်းသူက သွန်ယူသွားပါတယ် ။ ပြီး အဲ့ဒီ့လှည်းကို လမ်းထိပ်မှာ ရပ်ထားပြီး ည မှောင်မှ အမှိုက်ပုံ သွားထားပြီး ကားလာတဲ့ အခါ သွန်ပေးပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ အမှိုက်သိမ်းခြင်းကို ရပ်ကွက်သာယာရေး က လုပ်ပေးပါတယ် ။ တစ်အိမ်ကို တစ်လ ၁၀၀၀ ကောက်ပါသည် ။
စကာင်္ပူက တိုက်ခန်းတွေမှာ အမှိုက်ပစ်တဲ့ chute တွေ တိုက်တိုင်းမှာပါပါတယ် . အမှိုက်ကို အဲ့ဒီ့ chute ကနေ ပစ်ချရုံပါဘဲ ။ အောက်ဆုံးမှာ အမှိုက်လှည်းခံထားပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့တော့ အမှိုက်မတွေ့ရတော့ပါဘူး ။
ဒီက တိုက်ခန်းတွေကတော့ ကန်ထရိုက် အမြတ်ရဖို့သာ ကြည့်ထား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ရင်လည်း လာတ်စားနဲ့ ဆိုတော့ ………………
လူလားစံနစ်လား ငြင်းကြရင်းဘဲ ……
လေးပေါက် လောလောဆယ်တော့ အကျီပြန်လဲလိုက်ပါဦး …. :grin:
အခုက သူဌေးတွေရောခွေးတွေရော စည်းကမ်းမရှိတာဆိုးတယ်
ကားအကောင်းစားကြီးစီးပြီး ကားပေါ်ကနေကွမ်းသွေးထွေးတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲဟင်
အခုမှ အူကြောင်ကြောင်လုပ်မနေနဲ့ ……. နံပါတ် ၁၀ ပုံကညည်းလေ …. ဖွတုန်းက၀င်ဖွပီ အခုတော့သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်နေတယ် ………
စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်တဲ့လူကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား။
အမှိုက်ပုံးတွေ မရှိတာကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား။
အမှိုက်မှန်မှန် မသိမ်းတာ အမှိုက်သိမ်းစနစ် မပြည့်စုံတာတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား။
သူများကို အပြစ်တင်ဖို့ပဲ စဉ်းစားမိနေတယ်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်က အားလုံးထိ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ရင်
ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်အမှိုက်နဲ့ပါတ်သက်လာရင် ဘာဖိအားမှမရှိပဲနေလာတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အခုမှ စည်း နဲ့ကမ်းနဲ့လဲနေခိုင်းရော ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတော့ပဲ စိတ်ဖိစီးမှု့တွေဖြစ်နေကြတာ တော်တော်လေးစိတ် မကောင်းစရာပါ။ ကျန်တာတွေသာပြင်လို့ရမယ်။ ဒီအမှိုက်ကတော့တော်တော့်ကိုအတိုက်အခံလုပ်ယူရအုံးမှာ ပါ။ အဆင်ပြေရင်တော့ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ၊ အမှိုက်သိမ်းသမားတွေနဲ့စကားပြောထားတာလေးတွေကို ပိုစ့် တခုအနေနဲ့တင်ပါအုံးမယ်လေးပေါက်ရေ။
အမှိုက် နဲ့ပတ်သက်တိုင်း စည်ပင်သာယာအသုံးမကျဟု ပြစ်တင်မှုများ ရပ်သင့်ပါပြီနော
တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင် တရုတ်တွေက စည်းကမ်းမရှိပါဘူး … အလွယ်တကူ အမှိုက်ပစ်ချင်တဲ့သူတွေများတယ် … ဒါပေမယ့် အမှိုက်ပုံးတွေက များလွန်းတော့ အမှိုက်ပုံးထဲထည့်ဖြစ်သွားတာပဲ … သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတွေကလဲ ၂၄ နာရီ စောင့်ကြည့်ပြီး သိမ်းနေတော့ အမြဲတမ်းသန့်နေပြီး စည်းကမ်းရှိနေကြသလို ထင်ရပါတယ် …
တစ်ရက် လှည်းတန်းက စိန်ဂေဟာကို ဈေးဝယ်သွားရင်း လမ်းမှာ အအေးဝယ်သောက်မိလို့ အအေးဗူးက လက်ကကိုက်လျက်နဲ့ ပါသွားတယ် .. အဲဒါနဲ့ အပေါက်ဝမှာ အအေးဗူးကို လွှင့်ပစ်လိုက်ချင်လို့ ဘယ်မှာ အမှိုက်ပုံးရှိလဲလို့ တာဝန်ကျတဲ့အစောင့်ကိုမေးတော့ ဒီမှာ အမှိုက်ပုံးမရှိဘူးတဲ့ … ကျွန်မ အရမ်းစိတ်တိုသွားမိတယ် … အဲဒီအအေးဗူးအလွတ်ကို လက်ကိုင်အိတ်ထဲထည့်ပြီး ဈေးဝယ်ရပါတယ် … အိမ်အပြန်လမ်းမှာလဲ အမှိုက်ပုံးမရှိပြန်တော့ အိမ်အထိ (တိုက်ခန်း ၄ ထပ်ပေါ်) သယ်သွားရတယ် … ကျွန်မတို့အိမ်ယာဝင်းက ညနေ ၅ နာရီကနေ ၇ နာရီ အမှိုက်ပစ်ချိန်သတ်မှတ်ထားလို့ နောက်တစ်နေ့ အမှိုက်ပစ်ချိန်အထိ အဲဒီအအေးဗူးကို အိမ်ပေါ်မှာ သိမ်းထားလိုက်ရပါတယ် … အဲဒီလောက်တောင် အမှိုက်ပစ်ရတာ ခက်ခဲတာမို့ လူတော်တော်များများက တွေ့ရာနေရာမှာ ကြုံသလိုပစ်ကြတာကို အပစ်တင်ရ ခက်ပါတယ် …
မှန်ပါတယ်ရှင် တကယ်တော့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေ
သူတို့ချည်းပဲ လိုက်လုပ်နေလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး အမှိုက်
အလုပ်လုပ်ရဆုံးကစည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းတွေ လစာထုတ်ရက် ကျရင်မပေးချင်ကျတာ ကစည်ပင်ဝန်းထမ်းတွေကိုလစာပေးဖို့ကို တော်တော်လေးနောက်ကျမှပေးတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စည်ပင် ၀န်းထမ်းတွေအရင်လစာထုတ်နေလို့ဘဲ စနိုးဟိုတလောကလစာထုတ်ရက် လကုန်ရက်ပေါ့နော် ဆိမ်ကမ်းသာလမ်းဘက်ကသွားတာ လူတွေများကြီးဘဲ စည်ပင်သန့်ရှင်း ရေးဝန်ထန်းတွေတန်းစီနေတာတွေ့တယ် ဘာလည်းလို့ စပ်စုကြည့်လိုက်တာ လစာထုတ်ဖို့စောင့်နေတာပါတဲ့ စနိုးဝယ်ချင်တာတွေဝယ်ပီးပြန်လာတဲ့ထိ တယောက်တောင်မလျော့သေးပါဘူး လစာပေးဖို့ကို အဲ့လောက် ကြာအောင် ဘာလုပ်နေကျလည်းတောမသိဘူး အလုပ်လုပ်ရဆုံးလစာ၇ရင်နောက်ကျဆုံးက စည်ပင်သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတွေပါဘဲ။
စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့် ပစ်မှုတွေတွေ့ မြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာလှပါဘူး..
နောက်ပြီးသူ့ ကိုလည်း၊ဘာသာစကားနားလည်တဲ့သူနဲ့ 
စည်းကမ်းနဲ့ စနစ်ကျနမှုရှိဘို့ အတွက်ဆိုရင်..
အရိုးစွဲအောင်ရိုက်သွင်းသင်ကြားထားပေးဘို့ အဓိကလိုအပ်တယ်လို့ လည်းထင်မြင်မိပါတယ်။
ပစ်သူ သိမ်းသူ အချိုးညီ မှ သန့်ရှင်းလှပ မြို့ရွာအလှ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံးကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် စည်းကမ်းရှိအောင်နေကြရမှာပါ။
ဒါမှ . . တစ်ယောက်ကစ တစ်ရာဖြစ်သွားမှာပါ . . ။
မဝေေ၀ပြောတာမှန်ပါတယ်။ အမှိုက်ကိုဘယ်ပစ်ရမယ်မှန်းမသိတာနဲ့ အိတ်ထဲပဲထည့်သယ်ခဲ့ရတာတွေများပါပြီ။ အခုတော့ အမှိုတ်ပုံးလေးတွေ ဟိုတစုဒီတစုတော့တွေ့နေရပါပြီ။
အားလုံးပဲကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်သိကြမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါပဲရှင်။ စည်းကမ်းသည်လူ၏တန်ဖိုးပေါ့။
အော်၊ ဆိုင်းဘုတ်ခင်ဗျာ၊ သနားပါတယ်၊ သြဇာမတိုးရှာဘူး
အမှိုက်သိမ်းတာ စည်ပင်က အခွန်ယူထားလို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ….. မိမိက စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အမှိုက် မိမိမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ လူတွေမေ့လျော့နေတတ်ကြတယ် ။
လူတွေလေ .. စာတတ်ပါတယ် ဘယ်လောက်ပြောပြော ၊ အမှိုက်မပုံရဆိုတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်အောက်အမှိုက်လာပုံတာ .. အတော် ဂွတီး ဂွကျ နိုင်သလိုပဲ လေးပေါက်ရယ် … ။ ဆုပေး ဒဏ်ပေးစနစ်လုပ်လည်း ခဏတာပဲ ထိန်းလို့ရမှာ … ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲ စွဲမြဲပြီး သဘောပေါက်ကာ ဆင်ခြင်မှသာ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်မယ့် ကိစ္စမျိုးနော် … ။ အမှိုက်ကိစ္စက စိတ်မောစရာချည်းပါလား .. လေးပေါက်ရေ … ။
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်မှာ အမှိုက်ပစ်တာလေးလည်း…
(အော်၊ ဆိုင်းဘုတ်ခင်ဗျာ၊ သနားပါတယ်၊ သြဇာမတိုးရှာဘူး)
မေးကြည့်တော့ စာလုံးပေါင်းမှားနေလို့ ဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ပစ်တာတဲ့ဗျ။
နံပတ် လေးပုံမြောက်က ရှိုင်ကယ်နဲ့တရဲဂျီး..
စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်သူတွေကို လိုက်ဖမ်း ဒန်ငွေကောက် အဖွဲ့ဖွဲ့ ဖို့အစိုတင်သွင်းဘာဒယ်..
စည်းကမ်းသည် လူ၏တန်ဘိုး ဆိုတဲ့အတိုင်း
ပစ်တဲ့သူကော၊ သိမ်းတဲ့သူကော၊ ဖွတဲ့သူရော
စည်းကမ်း စနစ်တကျ ပစ်၊ ဖွ၊ သိမ်းကြမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ
ဟဲဟဲ- ပုံတွေက စုံစုံလင်လင်ပဲနော် အမှိုက်ကောက်ရင်း ရိုက်ထားတာလား
(ပြောရင်းနဲ့ တစ်ရူးပေပါလေး လွှင့်ပစ်လိုက်မိပြီ၊ ဘယ်သူ့မှမပြောနဲ့နော်)
ကျနော်က တရုပ်သိုင်းကားထဲကလို သူတောင်းစားဂိုဏ်းချုပ်ကြီးပါခင်ဗျာ
(နံပတ် လေးပုံမြောက်က ရှိုင်ကယ်နဲ့တရဲဂျီး..
မောင်ဗိုက်သူ့ပုံပါါရင် တရားစွဲမယ်ဆိုလို့ မနည်းဖျောက်ထားရတာအေ့
အိုးဘို ဟိုးအနောက်ထဲတွေရော သွားရိုက်ပါ့လား လေးပေါက် ဒီထက်လှတယ်
့သန့် ရှင်းလုပ်တာမယ် တောင်ကြီးစည်ပင်အတော့်
အလုပ် လုပ်သဗျ နော်လေးပေါက်ရေ
ဟုတ်ပါတယ် ကျနော် တို့ပါတ်ဝန်းကျင် သာယာ လှပ ဖို့ ဆိုတာ ကျနော်တို့နဲ့ လဲ အများကြီးဆိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းနေဖို့ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွတ်သင့်ပါတယ်။ အမှိုက်လိုက်သိမ်းဖို့ မဟုတ်ပေမယ့် အနည်းဆုံး အမှိုက်ကို စနစ်တကျ ပစ်သင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကိုယ်တာဝန်လွှတ်ပြီးရော ဆိုပြီး စည်ပင်ကို ဘဲ အပစ် ထိုင်ပြော နေမယ့် အစား စနစ်တကျ အမှိုက်ပစ်တတ်အောင် လုပ်ကြရင် ပိုကောင်းမယ်။
စည်ပင် က အလုပ်လုပ်တာ မှန်ပေမယ့် အမြင်မတော်တာလေး ကတော့ စည်ပင်အမှိုက်ကားက ၉ နာရီ နောက်ပိုင်း အမြဲပြည့်နေတာဘဲ လမ်းမှာ တွေ့တွေ့နေရတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်ကို မနိုင်သေးဘူးလို့လဲ ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ။် ပစ်သူ၊ ဖွသူ၊ သိမ်းသူ အားလုံး စည်းကမ်းတကျ ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
တကယ့် သဘာဝ ပဲ.။
အဲဒီ လို ကြွပ် ကြွပ် အိတ်တွေ ပလူ ပျံနေတာ မြင်ရင်….ဘာကို စိတ်တိုမှန်းမသိ တိုမိတယ် ။
အမှိုက်စနစ်တကျပစ်ဖို့အရေးမှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ဘာရောင်ညာရောင်နဲ့မှ ဆိုတော့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ဖိုးအကုန်မခံချင်တဲ့ အိမ်ရှင်မတွေက လူခြေတိတ်ချိန် အိမ်နောက် အိမ်ဘေးပစ်ကြပြန်ရော။
အရင်နှစ်တွေက သမိုင်းလမ်းဆုံ မိုးတွင်းရေလျှံတာ ကလေးတွေမျောပါဖူးတယ်။သမိုင်းချောင်းကို ရှင်းလိုက်ပြီးတော့ အဲဒီဒုက္ခမတွေ့ရတော့ဘူး။
အခုမြင်နေရတာ သမိုင်းချောင်းထဲမှာ အမှိုက်တွေ ဘောလောဘောလောနဲ့မျောလို့ မကြာခင် သမိုင်းလမ်းဆုံရေပြန်လျှံလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်က အန်တီပဒုမ္မာ etone ပိုစ်မှာ မန့်ထားတာဘဲ ခဏခဏ သတိရပါသည် ။
ကားသမားတွေကို မျက်နှာပူသည် ဆိုတာလေး ….. ပြေးပြီ……….
အမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင် တဲ့…
အမှိုက်တောင် စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ မပစ်နိုင်ကြလို့..
ကိုယ့်ပြဿနာ ကိုယ်မရှင်းဘဲ…. လမ်းဘေး လွှင့်ပစ်တတ်ခဲ့တာ။
ကိုယ် ပစ်တဲ့ အမှိုက်ကြောင့်…
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်း စေ.. ရောဂါဘယ ထူပြောစေသလို..
ကိုယ်စည်းကမ်း မရှိလို့…. ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေ…
အမှိုက်က စလို့…. ပြဿဒ်ထိအောင်….
အောက်ခြေ အမှိုက်မှသည်……….. အုပ်ချုပ်ရေး… ဥပဒေပြုရေး… တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်များထိ……
သြော်… စည်းကမ်း စည်းကမ်း….
အမှန်တော့… ဗမာတွေ စည်းကမ်းဖောက်လို့ ထီးနန်းပျောက်ခဲ့တာ…
စည်းကမ်း ပျောက်လို့…. ထီးနန်း ပျောက်ခဲ့တာ….